So Onyankopɔn De Aban Biako Bɛba Wiase? | Sua Biribi Fi Onyankopɔn Asɛm Mu
Sua Biribi Fi Onyankopɔn Asɛm Mu
So Onyankopɔn De Aban Biako Bɛba Wiase?
Nea yɛrebɛka ho asɛm wɔ ha yi yɛ nsɛm a ebia woabisa pɛn, na ɛbɛkyerɛ wo faako a wubetumi anya ho mmuae wɔ wo Bible mu. Yehowa Adansefo ani begye ho sɛ wɔne wo bɛbɔ ho nkɔmmɔ.
1. Adɛn nti na nnipa hia aban biako wɔ wiase nyinaa?
Nneɛma a ɛrehaw adesamma nnɛ no, ennyina faako; ɛrekɔ so wɔ wiase baabiara. Wohwɛ aman pii so a, nnipa dodow no ara di hia, na nkurɔfo hyɛ wɔn so. Aman bi so de, nnipa bebree anya wɔn ho ama abu wɔn so. Sɛ yebetumi akyekyɛ agyapade a ɛwɔ asase so no ama obiara anya bi pɛpɛɛpɛ a, gye sɛ yenya aban biako pɛ a ebedi wiase nyinaa so.—Kenkan Ɔsɛnkafo 4:1; 8:9.
2. Aban a ebedi wiase nyinaa so no, hena na obetumi ayɛ so hene?
Nnipa pii mpɛ sɛ ɔhene biako pɛ di wiase nyinaa so, efisɛ ɔbarima anaa ɔbea biara nni hɔ a obetumi ayɛ saa adwuma no yiye. Afei nso onipa bɛn na sɛ tumi bedi ne nsam a ɔremfa nyɛ nea ɔpɛ? Sɛ nkurɔfo dwen ho sɛ otirimɔdenfo biako bedi adesamma nyinaa so a, ɛbɔ wɔn hu.—Kenkan Mmebusɛm 29:2; Yeremia 10:23.
Yehowa Nyankopɔn ayi ne Ba Yesu sɛ onni adesamma so hene daa. (Luka 1:32, 33) Yesu nim sɛnea asase so asetena te. Bere a ɔwɔ ha no, ɔsaa ayarefo yare, kyerɛkyerɛɛ ahobrɛasefo na ɔne mmofra bɔe. (Marko 1:40-42; 6:34; 10:13-16) Enti Yesu yɛ Ɔhene a ɔfata paa.—Kenkan Yohane 1:14.
3. Ebetumi ayɛ yiye sɛ aban biako bedi wiase nyinaa so?
Onyankopɔn ayi ne Ba no sɛ ɔntena soro na onni asase so. (Daniel 7:13, 14) Ɛho nhia sɛ ɔmampanyin tena ne man mu nkurow nyinaa mu; saa ara na ɛho nhia sɛ Yesu tena asase yi so na watumi adi adesamma so.—Kenkan Mateo 8:5-9, 13.
Wugye di sɛ obiara begye Yesu atom sɛ Ɔhene? Dabi. Nnipa pa nkutoo na wobegye no atom. Wɔn a wonnye no ntom sɛ Ɔhene a ɔwɔ ɔdɔ na obu atɛntrenee a Yehowa apaw no no, Yehowa beyi wɔn nyinaa afi asase so.—Kenkan Mateo 25:31-33, 46.
4. Ɔhene a obedi wiase so no, dɛn na ɔbɛyɛ?
Sɛnea oguanhwɛfo boaboa ne nguan ano no, Yesu nso reboaboa ahobrɛasefo a wofi amanaman nyinaa mu ano, na ɔrekyerɛ wɔn ɔdɔ kwan a efi Onyankopɔn no. (Yohane 10:16; 13:34) Saafo no yere wɔn ho gyina Yesu ne n’ahenni no akyi. (Dwom 72:8; Mateo 4:19, 20) Nnipa a wogyina Yesu ahenni akyi denneennen no de biakoyɛ rebɔ dawuru wɔ wiase nyinaa sɛ Yesu abɛyɛ Ɔhene.—Kenkan Mateo 24:14.
Ɛrenkyɛ, Yesu de ne tumi bɛyɛ adwuma de agye adesamma afi wiase tumidifo a wɔaporɔw nsam. Wayi n’akyidifo anokwafo bi sɛ wɔbɛka ne ho na wɔatena soro adi asase so ahene. (Daniel 2:44; 7:27) Yesu Ahenni no bɛma Yehowa ho nimdeɛ ahyɛ asase so ma, na ɛbɛsan de paradise a adesamma hweree no mfiase no aba.—Kenkan Yesaia 11:3, 9; Mateo 19:28.
Dɛn na Ɛbɛkɔ so Atemmu Da?